Mobile House: ဖုန်း ရေ၀င် လျှင် ဘာလုပ် သင့် လဲ ????
သင်္ကြန် ရောက် ခါ နီးပြီ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဖုန်း ရေ ၀င် လျှင် ဘာလုပ် သင့် လဲ ဆို တာလေး ကို Mobile House မှ service ကျွမ်းကျင် သူ ကို ရဲရင့် အောင် မှ ပြော ပြပါမယ် ။ ဒီ ပို့ ကို ဖတ် ပြီး ကြိုက် တယ် ကျေးဇူး တင်တယ် ဆို Like ပေး ပါ ။ သူငယ် ချင်း တွေ လဲ သိ အောင် လို့ ရှယ် ပေး ကြ ပါ ။
ရေ ၀င် လျှင် ဘာ လုပ် ရမ လဲ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ ဂျာနယ် တွေ မှာ အမျိုး မျိုး ရေး ကြ သလို ကိုယ် ထင် သလို ပြော နေ ကြ တာ တွေ လဲ ကြားဖူး နေ ကြ မှာ ပါ ။ အဲ့ ဒါ တွေ မေ့ လိုက် ပါ တော့ ခု ပြော မဲ့ နည်း ကို Mobile House မှ service ကျွမ်းကျင် သူ တစ်ယောက် က ဖုန်းကိုင် တဲ့ သူ တွေ အားလုံး အတွက် အကောင်း ဆုံး နည်း ကိုပြောပြ ပေးပါမယ် ။
သင်တို့ စဉ်းစား ကြည့် ပါ ဖုန်းဖြုတ် ခ တပ်ခ ၊ စက်နဲ့ ပေါင်းပေး ခ တကယ် စဉ်းစား ကြည့် ရင် သင်တို့ အတွက် အရမ်း တန်ပါတယ် ။ ၅၀၀၀ လောက် နှမျော ပြီး ဖုန်း ဆက်သုံး လို့ ရသေး လား ဖွင့် ကြည့် လိုက် လို့ ရှော့ ဖြစ် ပြီး ic ပျက် သွား ရင် ic အပို ၀ယ် လို့ ရရင် တောင် ၁ သောင်ခွဲ က နေ ၁သိန်းခွဲ ထိ ရှိ ပါတယ် ။ သို့ ပေ မဲ့ ခုနောက် ပိုင်း ဖုန်း တွေ က IC မလာ တာ များ သလို တချို့ IC တွေ ကို ကော်လောင်း ပြီး အသေတပ် ထားတာကြောင့် လဲ လို့ မရနိုင် ပါဘူး ။
ပါဝါ ဖွင့် လိုက်တဲ့ အလုံး ကတော့ ၁၀ လုံး မှ ၈ လုံး ပျက် နိုင်ပါတယ် ။ ပြင် ရ တာ ရှိ သလို ပြင် မရ တာ လဲ ရှိ ပါတယ် ။
ဖုန်း ဆိုင် တွေ ကို ဘာကြောင့် အထင် မြင်မှား သင့် ????
ဆိုင်အများ စု က တန်ရာ တန်ကြေး ပဲ တောင်း တာပါ ။ ic လဲ ရမယ် လဲ လို့ ရတယ် ဆို Ic ဈေး နဲ့ လက်ခ နည်းနည်း ပေါ့ ။ဥပမာ IC 10,000 ဆိုလျှင် လက် ခ 5000 ဆိုပါ တော့ ဒီတိုင်း ဘာမှ မစဉ်းစား ပဲ ကြည့် မည် ဆို များ တယ် ထင်ပါမယ် ။ တကယ် က မများ ပါ ဘူး ။ဘာကြောင့် လဲ ဆို တော့ ဘယ် IC ပျက် လဲ သိ ခ ၊ အဲ့ IC ဖြုတ် ဖို့ စက် ၊ IC ခ တွေ က တကယ် စဉ်းစား မယ် ဆို သင်တို့ အတွက် လက်ခ ၅၀၀၀ ဆို တာ တန် လွန်း ပါတယ် ။IC လဲ လို့ မအောင် ခဲ့ ရင် အဲ့ ic ခ က ဆိုင်က ခံ ရတာ ဖြစ် ပါတယ် ။ဆိုင် ဖက် ကစဉ်းစားကြည့် ပါ ရရင် ၅၀၀၀ ။မရရင် ၁သောင်း အပြင် ပင်ပန်း ရတယ် ။ တခြားပစ္စည်းတွေ လဲ အဲ့ လိုပါ ပဲ ။ပစ္စည်း ဈေး ကို က ကြီး တာဖြစ် ပေ မဲ့ မသိကြ တော့ ဆိုင် ပို့ ရင် ပိုက်ဆံ ကုန် တယ် ထင် ကြ ပါတယ် ။ရေ၀င် ရင် များသော အား ဖြင့် စပီကာ ၊ နား စပီကာ ၊ မိုက် ၊ LCD ။ touch စတာ တွေ ပျက် တက်ပါတယ် ။စပီကာ ၊ နား စပီကာ ၊ မိုက် ကို ဖုန်း အများ စု ကတော့ ၅၀၀၀ ၀န်းကျင် ဖြင့် ပြုပြင် နိုင် ပါတယ် ။ဖုန်းပေါ် မူတည် ပြီး အချို့ ဖုန်း တွေ က တော့ ၁ သောင်း ကျော် သွား တာ တွေ ရှိတက် ပါတယ် ။ အထူး သဖြင့် ၂ သိန်း အထက် ပေးရတဲ့ ဖုန်း တွေ မှာ ပေါ့ ။
LCD (ရုပ်ပေါ် တဲ့ဟာ ) ၊ touch က တော့ ဖုန်း ပေါ် မူတည် ပြီး ဈေး အမျိုး မျိုး ရှိပါတယ် ။ တရုတ် ဖုန်း Touch ဆိုလျှင် ၈၀၀၀ မှ စပြီး ၃၀၀၀၀ အထိ အမျိုးမျိုး ရှိ သလို samsung တို့ sony, HTC , Huawei တို့ စတဲ့ ဖုန်း ကောင်း တွေ မှာ ဆို ၁၂၀၀၀ လောက် က နေ ပြီး ၂သောင်း . ၃ သောင်း .၄၊၅၊၆၊ရ သောင်း စဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ် ။samsung note2ဆို လျှင် LCD နဲ့ touch တွဲ ရပ် ဖြစ် တဲ့ အတွက် 200,000 မှ 250,000 ကြား ထဲ ရှိ ပါတယ် ။ အဲ့ ဒါ တွေ ကတော့ စက်ဖြင့် ပေါင်းပြီး မှ သိနိုင် မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ များသော အားဖြင့် တော့ စပီကာ ၊ နား စပီကာ ၊ မိုက် လောက် ပဲ အပျက် များပါတယ် ။
မန္တလေး မြို့ မှ သူ တွေ အတွက် ကို တော့ သင်္ကြန် အထူး အစီစဉ် အဖြစ် Mobile House ( ဖုန်းပြုပြင် ရေး နှင့် အရောင်း ဆိုင် ) မှ ၁၈ ရက် ၄ လ ၂၀၁၃ မှ ၃၀.၄.၂၀၁၃ အထိ ရေ၀င် ဖုန်းများ ကို အခမဲ့ စစ်ဆေး ပြီး စက် ဖြင့် ပေါင်း ပေး သွား မည် ။ ပျက်စီး တဲ့ ပစ္စည်း ကို လဲ ဈေးနှုန်း ချို သာစွာ ဖြင့် လဲလှယ် နိုင်မည် ဖြစ် သည် ။
ထို့ ကြောင့် မန္တလေး မှ သူ များ ဖို့ ဖုန်းထဲ ရေ ၀င် လျှင် ချက်ခြင်း ဓာတ်ခဲ ထုတ် ထား လိုက်ပါ ။ဆိုင်မ ပို့ ခင် ပါဝါ လေး များ လာသေး လားဆိုပြီး မစမ်း လိုက်ပါနဲ့ လုံးဝ ပြင်မရ တဲ့ ထိဖြစ် နိုင်ပါတယ် ။ ပြီး မှ ဆိုင် လာ ပြီး ပြုပြင် လိုက်ပါ ။ ဘာ မှ မပျက် ရင် ဘာ မှ ပေး စရာ မလို ပါ ဘူး ...
မှတ်ချက် - တခြား မြို့ ရှိ သူ များ အနေ နဲ့ က တော့ Service ကျွမ်းကျင်သော ဆိုင် များ ကို သာမေး မြန်းစုံစမ်း ပြီး ပြ ကြပါ ။ဆိုင်ကြီး တိုင်း နာမည် ကြီး တိုင်း ကောင်းသည် မဟုတ် ပါ ။
နောက် တစ် ချက် ကတော့ ဒီဆိုင် မရ နောက် တစ်ဆိုင် ဆို တာ မျိုး မတွေး ပါနဲ့ တစ်ဆိုင် လုပ် ထား ပြီး လျှင် နောက် တစ်ဆိုင် အနေ နဲ့ ပိုမို ခက်ခဲ စေ ပါတယ် ။ထို့ ကြောင့် စိတ်အချ ရဆုံးဆိုင် မှာ သာ အပ် ပါ ။
၂၂.၄.၂၀၁၃ ရက် မှာ ဖွင့် မည့် ဖုန်းပြုပြင် ရေး နည်း ပညာ သင်တန်း ကို ပထမ ဆုံး အပ် သော သင်တန်းသား ၃ ဦး ကို သင်္ကြန် အထူး အစီစဉ် အဖြစ် 10% လျော့ ပေး သွား မည် ဖြစ်ပါတယ် ။
စာရင်း ပေးသွင်း နိုင်ပြီ ။
ဖုန်း - ၀၉၉၁၀၂၂၄၄၃ ၊ ၀၁၁၂၀၃၁၁၉ ၊ ၀၉၄၉၂၃၉၃၈၄ ။
website - http://www.mobilehouse.co.nr မှာ လဲ ဖုန်း နဲ့ ပတ်သက် သည် များ ကို လေ့ လာနိုင်ပါတယ် ။
Posted by Ye Yint Aung at 9:07 AM
***Game တစ်ခုလုံးကို iOS Device တစ်ခုကနေအခြားi Dev...
Samsung Galaxy Y Duos GT-S6102 root လုပ်နည်း